Sidee Suuqgeynta Dhacdadu u Kordhinaysaa Jiilka Lead iyo Dakhliga?
Sabtida, Juun 10, 2017 Douglas Karr
Shirkado badan ayaa ku bixiya wax ka badan 45% iibkooda iyo miisaaniyaddooda suuqgeynta suuqgeynta dhacdooyinka tiradaasina way sii kordheysaa, hoos uma dhaceyso inkastoo ay caan ku yihiin suuqgeynta dhijitaalka ah. Shaki kuma jiro maskaxdayda awoodda kaqeybgalka, qabashada, kahadalka, soo bandhigida, iyo maalgalinta munaasabadaha. Inta badan macaamiishayada 'tilmaamaha ugu qiimaha badan waxay sii wadaan inay ku yimaadaan isbarasho shaqsiyeed - badankoodna dhacdooyinka. Waa maxay Suuqgeynta Dhacdada? Suuqgeynta dhacdooyinka waa